Orinasa miparitaka - Mpanamboatra sy mpamatsy fanaparitahana any Sina
Fitaovana fanaparitahana silika ultrasonika
Silica dia fitaovana seramika marobe. Izy io dia misy insulation elektrika, fahamarinan-toerana avo lenta ary mahatohitra fanoherana. Afaka manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana isan-karazany. Ohatra: Ny fampidirana silica amin'ny firakotra dia mety manatsara ny fanoherana ny abrasion amin'ny coating. Ny cavitation ultrasonic dia miteraka bubble kely tsy tambo isaina. Ireo gel kely ireo dia miforona, maniry ary mipoaka amin'ny tarika onja maromaro. Ity dingana ity dia hamokatra toe-javatra faran'izay mafy ao an-toerana, toy ny herin'ny herinaratra mahery sy microjet. The ...
Ny tatoazy ultrasonika dia mampiditra fitaovana fanaparitahana
Ny fidirana tatoazy dia misy pigment miaraka amin'ny mpitatitra ary ampiasaina amin'ny tombokavatsa. Ny ranomainty tatoazy dia afaka mampiasa loko isan-karazany amin'ny ranomainty tatoazy, azo afangaro izy ireo na afangaro mba hamoronana loko hafa. Mba hahazoana fampisehoana mazava ny lokon'ny tatoazy dia ilaina ny manaparitaka ny pigment ao anaty ranomainty amin'ny fomba mitovy sy milamina. Ny famafazana pigmentana ultrasonic dia fomba mahomby. Ny cavitation ultrasonic dia miteraka bubble kely tsy tambo isaina. Ireo gel kely ireo dia miforona, maniry ary mipoaka amin'ny tarika onja maromaro. T ...
Fitaovana famokarana nanoemulsions ultrasonic
Nanoemulsions (emulsion menaka CBD, emulsion Liposome) dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fitsaboana. Ny fangatahana tsena goavambe dia nampiroborobo ny fampandrosoana teknolojia famokarana nanoemulsion mahomby. Ny teknolojia fanomanana nanoemulsion ultrasonic dia voaporofo fa ny fomba tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Ny cavitation ultrasonic dia miteraka bubble kely tsy tambo isaina. Ireo gel kely ireo dia miforona, maniry ary mipoaka amin'ny tarika onja maromaro. Ity dingana ity dia hamokatra fepetra faran'izay mafy ao an-toerana, toy ny s ...
Fitaovana fanaparitahana ultrasound graphene
Noho ny fananana graphene miavaka, toy ny: tanjaka, hamafin'ny fiainana, serivisy sns ... Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nanjary be mpampiasa kokoa ny graphene. Raha te hampiditra graphene ao anaty akora mitambatra sy hitana ny andraikiny dia tsy maintsy aparitaka ao anaty nanosheets tsirairay izy io. Ny avo kokoa ny haavon'ny deagglomeration, ny mazava kokoa ny anjara asan'ny graphene. Ny fihoaram-pefy ultrasonic dia mandresy ny herin'ny van der Waals miaraka amin'ny herin'ny herinaratra avo 20 000 isan-tsegondra, ka ...
Fitaovana fanaparitahana pigmentana ultrasonic
Ny pigmen dia miparitaka amin'ny loko, coatings, ary inks mba hanome loko. Fa ny ankamaroan'ny fitambarana vy amin'ny loko, toy ny: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 dia singa tsy voavaha. Izany dia mitaky fomba mahomby amin'ny fanaparitahana mba hanaparitahana azy ireo amin'ny fampitaovana mifanaraka amin'izany. Ny teknolojia fanaparitahana ultrasonic no fomba fanaparitahana tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Ny cavitation ultrasonic dia mamokatra faritra mitazona tsindry avo sy ambany tsy voatanisa ao anaty ranoka. Ireo faritra avo sy ambany ireo dia misy vokany eo amin'ny par ...